Linus Torvalds waxay u jawaabtay Slashdot Readers | Laga soo bilaabo Linux
Qeybta Linux ee slashdot.com ayaa ku dhex martay tartan akhristayaasheeda su'aalo ay weydiiyaan Linus. Su'aalaha la weydiiyay, daraasiin ka mid ah su'aalaha leh natiijada ugu sareysa ayaa la xushay, maalmo ka horna waxay daabaceen jawaabihii uu bixiyay:
Su'aasha ugu horreysay waxay ahayd fikirkaaga ku saabsan barnaamijyada softiweerka ee loo yaqaan 'patent wars', ee lagu xusay SCO iyo hababka lagu ogaanayo xadgudubyada shatiga isha furan. Linus wuxuu sheegay in cadhadiisa aysan ka soo horjeedin kaydka shatiyada laakiin ay ka soo horjeeddo xad dhaafkooda iyo siyaasadooda xun, in dhibaatooyinka xuquuqda lahaanshaha iyo "u adeegsiga sharciga hanjabaad" ay yihiin laba dhibaato oo kala duwan (oo loola jeedo SCO), iyo in markii uu sheegay in ilaalinta xuquuqda lahaanshaha ay aad u xooganeyd, wuxuu ula jeedaa heesta "nolosha qoraaga + 70 sano" (waqtiga ay qaadaneyso in shaqada ay u gudubto bulshada)
Su'aasha labaad waxay ku saabsanayd aragtidaada tilmaamaha uu maamuli karo processor-ka laakiin aan la fulin karin (sida isbarbardhiga xargaha dqword). Linus wuxuu sheegay inuusan isagu jeclayn muuqaalada cusub, in wada shaqaynta iyo iswaafajinta ay muhiimad gaar ah u leeyihiin naqshadeynta processor-ka, wuxuuna soo xigtay Edison oo uu yiri "Xariifnimadu waa 1% dhiirigelin iyo 99% dhidid." Waxa kale oo uu u sheegayaa naqshadaha processor-ka qaar ka mid ah tilmaamaha sida samaynta nidaam hoosaad xusuus weyn oo ka madax bannaan tilmaanta la dejiyey iyo in CPU-du aanu weydiisan jadwalka wax-dhigista ee daahitaanno tilmaamo ah ama xaddidaad-yareynta (wuxuu yidhi taas awgeed ayay u neceb tahay) processor Itanium, maxaa yeelay waa wax lagu qoslo in la soo bandhigo microarchitecture-ka qaybta wax lagu barto).
Su’aasha seddexaad waxay ahayd maxaad si kaduwan u sameyn laheyd hadaad aqoon iyo karti u laheyd maanta 20 sano kahor. Waxba kama dhaho. Taasi inkasta oo khaladaadka ay jiraan, wuxuu doortay waxa saxda ah kan ugu weyn.
Su’aasha afraad waxay ku saabsanayd microkernels. Linus wuxuu sheegay in dhibaatada iyaga ka haysata ay tahay inay dhibaatada booska dhex dhigaan dhibaatada wada xiriirka, halkaasna ay ka dhigayaan isku dhexyaac dheeraad ah sida raadinta habab cusub oo looga fogaado daahid iyo isgaarsiin dheeri ah.
Su'aasha shanaad waxay ahayd sida Linux u awooday inay ka fogaato kala qaybsanaanta nidaamyada kale ee ku saleysan UNIX (sida nidaamyada BSD). Linus ayaa yidhi, sida uu aaminsan yahay GPLv2 in liisanka wax badan ku quseeyay taas iyo (isaga) waxa muhiimka u ah rukhsadda ilaha furan maahan inay bixiso suurtagalnimada foorji, laakiin waxay dhiirrigelinaysaa isku darka koodhka foojarka ah.
Su'aasha lixaad waxay la mid tahay tan saddexaad, laakiin ku saabsan GIT. Wuxuu yidhi waxay hagaajineysaa oo kaliya faahfaahinta yar yar laakiin naqshadda niyuukleerka waa mid aad u adag oo aysan haynin macluumaad xad dhaaf ah. Waxa kale oo uu amaanay shaqada June Hamano ee ah ilaaliyaha godadka.
Su'aasha toddobaad waxay ku saabsanayd horumarka kaydinta (tixraac Ceph, oo 2 sano ka hor lagu soo daray kernel). Wuxuu yidhi ma aha wax uu aad u xiiseeyo. Waxa kaliya ee ay dhihi karto waa inaysan taageerin kaydinta meertada oo layaabkeeduna ay yihiin wax laga naxo.
Su'aasha sideedaad waxay ku saabsanayd jabsiga kernel-kaaga. Linus wuxuu sheegay inuusan waqtigiisa ku qaadanaynin inuu wax qariyo, laakiin uu akhriyo emayllada iyo koodhadhka ay dadka kale qoreen. Iyo in markii uu ku lug yeesho koodhka, sababtu maaha inuu qabow yahay, laakiin sababta oo ah koodhku wuu jaban yahay waana marka uu bilaabayo inuu ku wareego dadka qoray. Si kastaba ha noqotee waxaad dooneysaa dad badan inay awoodaan inay fahmaan nooca qirashada heerka aadka u hooseeya, oo tusaale u dhig wax aad u fudud sida ka saarista shey ku jira liiska isku xiran.
Su’aasha sagaalaad waxay ahayd buugaagta. Wuxuu yidhi weligiis kama fikiri karo buug "noloshiisa beddelay," laakiin taa beddelkeeda akhrisku wuxuu u sii jeedaa inuu ka baxsado. Wuxuu xusayaa cinwaanno ay ka mid yihiin "The Selfish Gene" oo uu qoray Richard Dawkins, "Shisheeye dhul aan caadi ahayn" oo uu qoray Robert A. Heinlein, iyo "The Lord of the Rings" (oo uu ku andacooday inuu ka mid ahaa buugaagtii ugu horreeyay ee uu ku akhriyo Ingiriisiga. Wuxuu ku bilaabay isagoo adeegsanaya a qaamuus, oo dhammeeyey iyadoon loo baahnayn).
Su’aasha tobnaad waxay ku saabsanayd sidaad walaaca ula qabato. Wuxuu yidhi waan ku raaxaystaa doodda iyo in kasta oo qaniinyada uu sameeyo, haddana wuu garanayaa goorta uu joojinayo ku mashquulka mawduuca oo uu sidaas uga fogaado ku waasho. Wuxuu xusayaa wuxuu u arkay inuu yahay waqtigiisii ​​ugu xumaa, caanka ah "Linus doesn't Scale" laga soo bilaabo 10 sano ka hor halkaas oo uusan aad ugu baraarugsanayn koritaanka geedaha.
Su'aasha ugu sarreysa waxay ahayd in la sharaxo kombuyuutarkaaga. Linus waxay leedahay Westmere 4-core PC ah oo aan wax gaar ah ahayn marka laga reebo kiiskeeda iyo Intel SSD-keeda. Isaguna sidoo kale wuxuu leeyahay 11 ”Apple MacBook Air (IYO LA’AAN OS X), maxaa yeelay wuxuu neceb yahay laptop-yada waaweyn.
Su’aasha ugu dambaysayna waxay ahayd “Maalin maalmaha ka mid ah ayaad gudan doontaa waajibaadkaaga. Sideed u aragtaa kernel iyo nidaamka deegaanka Linux intaas ka dib? Linus wuxuu yiri ha walwalin maadaama uu leeyahay beel horumarineed aad u xoogan wuxuuna leeyahay dhowr "liutenants" oo booskiisa buuxin kara. Sidaas oo ay tahay, ma arkaysid adiga oo joojinaya waxa aad qabanaysay 20 sano.
Boostada asalka ah: http://meta.slashdot.org/story/12/10/11/0030249/linus-torvalds-answers-your-questions
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Linus Torvalds waxay u jawaabtaa akhristayaasha Slashdot
Linus-ka weyn Mac ayuu leeyahay !!! Lol waa inay jiraan wax yar oo qarka u saaran wadno qabad ...
Tani marwalba waa la ogaa, wuxuu leeyahay Mac laakiin ma isticmaalo OS-kooda
LAAKIIN isagu Mac ayuu leeyahay !!! Oo haddaan iibsado Mac si aan u isticmaalin MacOS, waxay ka dhigan tahay inaad u malaynayso in qalabku u qalmo, sax?
MacbookAir wuxuu ka mid ahaa laptop-yada ugu fudud ee fudud (ultrabooks?) Si loo soo saaro. Markaad u aragto Linus inuu doorbido laptop-yada qafiifka ah, ma ahan wax lala yaabo. Sikastaba, mac guud ahaan waxay leeyihiin qalab wanaagsan, in kastoo dabcan, waligey ma iibsan laheyn waxyaabahaas midkood 🙂
Linus wuxuu cadeeyay in Mac hadiyad yahay. Waxyaabo kale ayaa noqon lahaa in la bixiyo kombuyuutarka Apple.
Nin yahow ... qalabku macno malahan. Kumaa jeclaan lahaa kombiyuutar leh 4GB oo DDR3 RAM ah, Core i7… a (ma garanayo…) 120GB SSD, iwm. LOL!
Wuxuu leeyahay Mac laakiin ma isticmaalo OSX so ..sidaa darteed wuxuu kaliya ugu iibsaday naqshadeynta iyo cabirka, uguyaraan waa sidaan u fahmay.
Dhibaatada Apple ma ahan qalabka maadama ay ficil ahaan isku mid tahay oo meelkasta laga heli karo. Dhibaatadu waxay si toos ah u tahay nidaamka xD
Maaha wax badan, halkii ay ka ahayd caqli-galnimada ay si fiican ula macaamilaan suuqgeynta.
Cojonudo, oo ah qoraal ku saabsan fikradaha kala duwan ee Linus Torvalds iyo faallooyinka dhammaantood waxay ka hadlayaan HAL mashiinadooda. Waa la oggol yahay, waaxda suuqgeynta ee Apple waa usha. 😀
oo maxay tahay nacaybka uu qabo MAC? MACs waa PC aad u fiican (in kasta oo aysan igu habboonayn inaan qabsado ... laakiin waxaa laga yaabaa inaan mid haysto) hadda way ka duwanaan lahayd haddaan idhaahdo waxaad leedahay mid leh Wx (Windows Nooc kasta)
Mid ka mid ah waxyaalaha wanaagsan ee ku saabsan Wx waa barta daciifka ah ee GNU / Linux: Haddii aan jeclaanno iyo haddii kaleba, xaddiga barnaamijyada la heli karo ayaa aad uga sarreeya.
Waxaan waligay arkay doqon ka xidhan coco oo adoo adeegsanaya GNU / Linux diidaya adeegsiga OS kale
Had iyo jeer waxaan isticmaalaa GNU / Linux oo waxaan haystaa Wx haddii aan u baahdo inaan isticmaalo barnaamij cayiman, oo marar dhif ah dhaca laakiin aan haysto.
Maxaa ka jira Luis.
Eeg, waxaan isticmaalayay Linux muddo ku dhow 20 sano weligayna uma baahnin wax barnaamij Windows ah ama codsi ah oo aan ka jirin Linux. Xaqiiqdii, inbadan oo ka mid ah macaamiishayda waxay leeyihiin nidaam daaqado ah haddii aan u baahanahay inaan wax ka qabto tan markaa waan hubaa waana taas. Macluumaadka kala duwan, maareeyayaasha iyo maamulayaasha, naqshadeynta iyo sawirada vektorka, otomatiga xafiiska, barnaamijyada, iwm. (xitaa softiweer toosan) waad heleysaa iyaga, kaliya waa baaritaan.
Waan ixtiraamayaa aragtidaada, laakiin waxaan u maleynayaa inaad u baahan tahay inaad si qoto dheer u dhaadhacdo waxaadna arki doontaa in waxa aan kuu sheegayo ay run yihiin. Waan ogahay inay jiraan softiweer khaas ah oo loo sameeyay deegaankan laakiin hadaad waxqabad samayso, sidaan soo sheegay uma baahnid daaqadaha. Xitaa Khamrigu wuxuu ku siin karaa xalka xulashooyin badan.
Si aan kiis kuu siino, marka la samaynayo warbixinta dakhliga ee internetka waa lagama maarmaan in la rakibo saxeex elektaroonig ah kombiyuutarka aan adeegsanayno, in kasta oo la filayo inuu sidoo kale la shaqeeyo Firefox ficil ahaan wuxuu la socdaa oo keliya IExplorer.
Waxaan sidoo kale arkaa baahi loo qabo dalab ku saabsan biilasha, xisaabaadka iyo maareynta bakhaarada, wax la mid ah FacturSol.
Qeyb ahaan waxaad i siineysaa sababta: Haddii aad awood u yeelato Windows-ka ama aad isticmaasho Khamri waa sababta oo ah inaad mar uun adeegsato codsi Windows ah, sax?
Diiwaanka, waan jeclahay GNU / Linux waana necbahay labada Microsoft iyo Aple laakiin hadaan u baahdo inaan isticmaalo barnaamij cayiman ma diidayo isticmaalkiisa waayo waa OS oo aanan jeclayn.
Waa run laakiin tani waa halkii sababta oo ah horumarinta bogaggan khaaska ah sida kuwa Khasnadda ayaa ah in lagu horumariyey teknoolojiyada Microsoft ee dheereeya heerarka in ka badan intii ay ahayd waana tan keenaysa iswaafaq la'aanta barnaamijka saddexaad. Haddii Microsoft ay ixtiraamto heerarka sida ay tahay, tani dhibaato ma noqon doonto. Xitaa haddii aad isticmaasho MacOS (Libaax ama Snow Leopard) oo Safari u adeegsada biraawsarka webka, waxaad leedahay dhibaato la mid ah.
Sida had iyo jeer, u gaar ah qaabkiisa iyo qaab fekerkiisa, sida loo maahmaahdo: hanad iyo muuqaal qabriga. Wareysi aad uwanaagsan iyo su'aalaha waxay daboolayaan mowduucyo badan oo guud ahaan ah kuwa si qoto dheer u xididaysan.
Marka laga hadlayo MAC, uma arko waxa qaldan maaddaama qalabka astaantani uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican, laakiin aan waxba laga qorin guriga. Waa in la xusuusnaado in sumcaddan tayada ay ka timaaddo xilligii la aasaasay shirkadda, taas oo ay ugu wacan tahay shaqada «Woz» (Steve Wozniack - oo ka mid ah 3 aasaasayaasha Kombuyuutarrada Apple), taas oo ka muuqata aragtidayda shakhsi ahaaneed, waa mid ka mid ah injineerada ugu fiican abid, ee maahan wax aan ka shaqeeyo Atari anigoo hagaya Nolan Bushnell.
Fix, Woz wuxuu ka shaqeeyaa HP ee ma aha Atari.
Sixitaanka Sixitaanka: Shaqooyinku waxay u shaqeeyeen Atari waxayna qandaraas hoose la galeen Woz mashruuc cusub, markaa si toos ah ama si dadban, Woz wuxuu u shaqeeyey Atari. (Akhri taariikh nololeedka shaqooyinka haddii aadan i rumaysanayn!)
Xaqiiqdii, Woz wuxuu la kulmay Shaqooyinka asxaab wadaag ah, Bill Fernandez (haddii aan si sax ah u xasuusto). Faahfaahinta ayaa ah in markii Woz uu naqshadeeyay kombuyuutarkiisii ​​ugu horreeyay, sababo qandaraas awgood uu ku qasbay inuu marka hore u soo bandhigo HP, laakiin waxay ugu yeeraan inuu waalan yahay iyo in qalabku uusan mustaqbal lahayn (si la yaab leh oo la mid ah kan IBM), sidaa darteedna Jobs Wuxuu ku soo bandhigay Jaamacadda Berkeley halkaas oo uu ku gaadhay guul weyn taas oo ah sababta Jobs, Ronald Wayne iyo Woz ay 1976 u aasaaseen Apple Computers Inc ..
Maaddaama qofna uusan ka hadlin mawduuca boostada ... aniga ayaa sameyn doona myself
Guud ahaan waxaan jecelahay in qof sida Linus oo kale ahi diyaar u yahay inuu fikradaha la wadaago adeegsadayaasha (maahan barnaamijyo ama wada-hawlgalayaal, kaliya dadka isticmaala) Waa mid khaas ah waan ka helay suaasha ugu dambeysay Maxaa dhici doona markii penguin-ka weyn uu nasto? Oo wuxuu yidhi wuxuu igu qancinayaa xaqiiqda ah in beeshu aad u adagtahay (oo si muuqata loo arko).
Iyo sida Mac ... Stallman (oo aan waxba ku lahayn tan) uu had iyo jeer difaaco xorriyadda, miyaanay xoriyadda doorashada sidoo kale geli doonin xorriyad faraxsan? Haddii aan haysanno xorriyad aan wax ku naqdinno, miyaan annaguna xor u ahayn inaan kala dooranno "PC" ama "Mac", ama xitaa xorriyadda aan ku kala dooran karno barnaamijyada bilaashka ah iyo kuwa lahaanshaha? Waa shaki yar in aan had iyo jeer lahaa.
Aniga oo aan ogeyn waxa Stallman kuugu jawaabi doono, kaligeyga waxaan kuu sheegi karaa in aan xor u nahay inaan soo iibsano Mac ama iPhone, laakiin si kasta oo aan u leenahay xoriyada aan ku dooran karno iyaga, waxba ma damaanad qaadi doono inaan helno xorriyad (iyo asturnaan) marka aan isticmaaleyno. Uma arko wax caqli gal ah dhaqdhaqaaq intan le'eg oo internetka ah si hadhow aan annaga lafteena uga cabno kuwa u dagaallamaya inay xorriyadda naga gooyaan.
Ka waran Leo.
Waa run, waxbadan ayaan tagnay (aniga ayaa iskudarey) bilaash. Fiiri, xorriyadda sidaad sheegto waa weyn tahay, haddii aan soo iibsanno oo isticmaalno (sharci ahaan ama sharci-darro) softiweer ama qalab gebi ahaanba waan kugu raacsanahay. Xaaladda gaarka ah ee softiweerka, xorriyadda aan ka fahmay, dhinaca aragtida isticmaale caam ah, waa inaan koobi karo oo aan rakibi karo inta jeer ee igu habboon aniga oo aan ku xadgudbin wax sharci ah.
Dabcan, waxaan u maleynayaa isku mid. Laakiin shaqsiyan, sidoo kale waxaan u adeegsadaa xorriyadeyda doorashada anigoo adeegsanaya darawalka lahaanshaha ee Nvidia, anigoo ka warqaba inuu igu xadidayo, laakiin taasi micnaheedu maahan inaan joojinayo xoriyaddeyda, iyo in yar oo aan u diro inaan u duulo markasta oo aan doono.
Tusaale: Firefox waa mid ka mid ah daalacashada ugufiican waana bilaash waana kudardarooyinka ay ku siinayaan xuriyad weyn inaad ku isticmaasho internetka, laakiin anigoo isticmaalaya xoriyadeyda waxaan isticmaalaa Midori, taasoo, inkasta oo ay lacag la’aan tahay oo ay leedahay waxyaalaheeda wanaagsan, oo aan u xushay. Way i xaddideysaa maxaa yeelay uma fiicna sida Firefox, anigoo taas ka warqaba, weli waan doortaa.
Ogow in aanan difaaci doonin softiweer lahaansho, iyo sidoo kale inaan qabo aragti isku mid ah sidaada, laakiin waa sidaan ku arko xorriyadda doorashada.
Aan aragno, iyadoo la tixraacayo xorriyadda iyo tan kala-doorashada "khaaska ah" iyo "bilaash" softiweerka ... in mid kastaa uu doorto wixii cadaab ah ee uu doonayo. Waxa muhiimka ah waa "xulashada" iyo ogaanshaha cawaaqibka ... wax kale ma jiraan.
Linus waxaad tahay groso.
Waxaan sidoo kale doonayaa inaan ka hadlo mawduuca boostada ...
Linus, ninka, tusaha, tusaalaha ah in la raaco waxkasta oo wanaagsan, laga yaabee maalin maalmaha ka mid ah waxaan arki doonaa isaga oo u muuqda Steve Jobs, oo ah maamule qaylo badan oo geesinimo leh oo laga cafiyo inuu yahay kan ugu fiican. Waqtigaas ka dib, aniga iyo inbadan oo naga mid ah waxaan ka dhihi doonnaa isaga isla sidii aan maanta uga hadlayno Shaqooyinka.
Waxa aan cidina ku dhiiran karin inuu dhaho waa in MacBook-kiisu leeyahay Windows 7 xD
Bill Gates-na wuxuu Debian Stable kula adeegsadaa LXDE kombuyuutarkiisa 24-ka ah maxaa yeelay wuxuu jecel yahay xawaaraha. XD
Mid ka mid ah haddii aan ku hubsado arintan kernels ... Waxaan ku rakibay 2 mashiin oo kala ah Kubuntu 12.10 iyo Linux Mint 13 iyo labadaba markii laga badalayo nooca 3.5.7 ilaa 3.6.2 ama 3.6.3 Pidgin imika aniga uma shaqeynayo ama Kopete wuxuu ii sheegayaa inaan ka xirnahay degel kale, taas oo aan run ahayn, oo markaan furayo fariintayda Opera, inkasta oo la furo, waxba ma shubto, isla sidaas ayey ku dhacdaa Chrome iyo Mozilla, iyagu way furaan bogagga laakiin waxba ma rartaan. Waxay ka dhigaan mid aad u gaabis ah, markay ku soo laabanayaan 3.5.5. ama 3.5.7 ama xitaa 3.5.0.17 oo uu 12.10 ku yimaado wuxuu u shaqeeyaa si qumman oo dheecaan ah Pidgin ama Kopete iima sheegayo inaan ku xirnahay goob kale, waxaan dib u soo ceshaday qayb ka mid ah taxanaha 3.6 iyo markale khaladaadkii Xitaa way iga tagtaa aniga oo aan lahayn kumbuyuutar ama bluetooh oo beddelaya qaabeynta LibreOffice.
Ma ku dhacdaa qof kale?
Laga soo bilaabo nooca soo socda, horumarka Ubuntu wuxuu noqon doonaa "sir" si looga fogaado dhaleeceynta